132s Maxay afartaas jamhuuriyadeed uga soo horjeedaan biilka kicinta ee aqalka senate-ka images and subtitles
- Wadankeena wuxuu ku dhisan yahay sharafta shaqada. Waxa biilkani sameeyo, asaga oo aan hagaajinin, ma waxaa si fudud loo leeyahay waad kasban kartaa lacag badan adigoo shaqo la aan ah intaad awooddo inta aad shaqeyneyso. Taasi waa dhiirigelin qalloocnaan leh. Ujeeddadiisu ma ahayn inaan dadka dhiirrigelinno inaadan shaqeynin oo lacag badan sameysan intii aad shaqada ku noqon lahayd oo aad lacagtaadii caadiga ahayd heli lahayd. -Badba biilkan, $ 600 ee bixinta dusha sare ee dheefaha gobolka dhab ahaantii waxay u oggolaataa dadka inay dakhligooda ku dhowaad labanlaabmaan duruufaha qaarkood. Oo waxaan rabaa inaan caawiyo dadka. Waxaan rabaa inaan hubiyo in, haddii aad shaqadaada weyso, inaanu mushaharkaaga daboolayno. Laakiin biilkan dhexdiisa, waxaad helaysaa $ 23.15 saacaddii, ku saleysan 40-saacadood usbuuc shaqo, ma aha in la shaqeeyo. -Kani waa dood ku saabsan bal in la sameeyo iyo in kale waxaynu siinaynaa biil si liidata loo diyaariyey garaac qarankan wali aduu bilaha soo socda iyadoo si ula kac ah kordhineysa shaqo la’aanta. Taasi waa waxa dooddu ku saabsan tahay. Marka waxaan rabnaa inaan sameyno wax runtii fudud. Waxaan rabnaa inaan hagaajino waxa halkan ku jabay adoo sheegaya in manfacyada caymiska shaqo la aanta waa in lagu xidhaa 100% ee mushaharkaagii ka hor intii aadan shaqo lahayn. Tani maahan keliya dadka markii horeba shaqo la'aan noqotay. Tani waxay ku saabsan tahay dadka iyaga laga dhigayo inay noqdaan kuwa bilaa shaqo ah toddobaadyada soo socda. Wax ka beddelkan oo dhami waxay leeyihiin waxaan codeyneynaa dhowr daqiiqo gudahood waa in aan daboolno dheefaha shaqo la'aanta 100% mushaharka aad qaadanaysay markii aad shaqaysay. -Ugu keen sharcigaan, sida hadda qoran, dowladda ayaa bixin doonta dad badan oo Mareykan ah oo dheeraad ah inay ka mid noqdaan kaalmada dowladda intii ay ka shaqeyn lahaayeen haddii ay ka shaqeeyaan shaqooyinkooda caadiga ah. Waxaan taageersanahay ballaarinta barnaamijka caymiska shaqo la'aanta. Waa habka ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan ee lacag lagu helo dadka sida ugu badan u baahan. Laakiin waa inaannaan abuurno nidaam halkaasoo faa'iidooyinka caymiska shaqo la aanta ayaa ka badan mushaharka. Ma siin karno dadka wax kabadan oo aan shaqeyneynin inay shaqeeyaan. Tani waa dareen guud oo aasaasi ah.
Maxay afartaas jamhuuriyadeed uga soo horjeedaan biilka kicinta ee aqalka senate-ka
< start="0.1" dur="5.1"> - Wadankeena wuxuu ku dhisan yahay sharafta shaqada. >
< start="5.2" dur="3.768"> Waxa biilkani sameeyo, asaga oo aan hagaajinin, >
< start="8.968" dur="4.366"> ma waxaa si fudud loo leeyahay waad kasban kartaa lacag badan >
< start="13.334" dur="2.534"> adigoo shaqo la aan ah >
< start="15.868" dur="3.033"> intaad awooddo inta aad shaqeyneyso. >
< start="18.901" dur="4.433"> Taasi waa dhiirigelin qalloocnaan leh. >
< start="23.334" dur="5.367"> Ujeeddadiisu ma ahayn inaan dadka dhiirrigelinno >
< start="28.701" dur="3.432"> inaadan shaqeynin oo lacag badan sameysan >
< start="32.133" dur="5.167"> intii aad shaqada ku noqon lahayd oo aad lacagtaadii caadiga ahayd heli lahayd. >
< start="37.3" dur="2.534"> -Badba biilkan, $ 600 ee bixinta >
< start="39.834" dur="2.1"> dusha sare ee dheefaha gobolka >
< start="41.934" dur="3.4"> dhab ahaantii waxay u oggolaataa dadka inay dakhligooda ku dhowaad labanlaabmaan >
< start="45.334" dur="1.733"> duruufaha qaarkood. >
< start="47.067" dur="1.2"> Oo waxaan rabaa inaan caawiyo dadka. >
< start="48.267" dur="2.866"> Waxaan rabaa inaan hubiyo in, haddii aad shaqadaada weyso, >
< start="51.133" dur="2.334"> inaanu mushaharkaaga daboolayno. >
< start="53.467" dur="4.9"> Laakiin biilkan dhexdiisa, waxaad helaysaa $ 23.15 saacaddii, >
< start="58.367" dur="3.2"> ku saleysan 40-saacadood usbuuc shaqo, ma aha in la shaqeeyo. >
< start="61.567" dur="2"> -Kani waa dood ku saabsan bal in la sameeyo iyo in kale >
< start="63.567" dur="2.633"> waxaynu siinaynaa biil si liidata loo diyaariyey >
< start="66.2" dur="3.467"> garaac qarankan wali aduu bilaha soo socda >
< start="69.667" dur="3.8"> iyadoo si ula kac ah kordhineysa shaqo la’aanta. >
< start="73.467" dur="1.7"> Taasi waa waxa dooddu ku saabsan tahay. >
< start="75.167" dur="1.866"> Marka waxaan rabnaa inaan sameyno wax runtii fudud. >
< start="77.033" dur="2"> Waxaan rabnaa inaan hagaajino waxa halkan ku jabay >
< start="79.033" dur="2.634"> adoo sheegaya in manfacyada caymiska shaqo la aanta >
< start="81.667" dur="2.4"> waa in lagu xidhaa 100% >
< start="84.067" dur="2.5"> ee mushaharkaagii ka hor intii aadan shaqo lahayn. >
< start="86.567" dur="3.267"> Tani maahan keliya dadka markii horeba shaqo la'aan noqotay. >
< start="89.834" dur="2.6"> Tani waxay ku saabsan tahay dadka iyaga laga dhigayo inay noqdaan kuwa bilaa shaqo ah >
< start="92.434" dur="1.5"> toddobaadyada soo socda. >
< start="93.934" dur="3.4"> Wax ka beddelkan oo dhami waxay leeyihiin waxaan codeyneynaa dhowr daqiiqo gudahood >
< start="97.334" dur="2.467"> waa in aan daboolno dheefaha shaqo la'aanta >
< start="99.801" dur="4.332"> 100% mushaharka aad qaadanaysay markii aad shaqaysay. >
< start="104.133" dur="1.867"> -Ugu keen sharcigaan, sida hadda qoran, >
< start="106" dur="1.767"> dowladda ayaa bixin doonta dad badan oo Mareykan ah oo dheeraad ah >
< start="107.767" dur="1.7"> inay ka mid noqdaan kaalmada dowladda >
< start="109.467" dur="2.434"> intii ay ka shaqeyn lahaayeen haddii ay ka shaqeeyaan shaqooyinkooda caadiga ah. >
< start="111.901" dur="3.7"> Waxaan taageersanahay ballaarinta barnaamijka caymiska shaqo la'aanta. >
< start="115.601" dur="2.399"> Waa habka ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan ee lacag lagu helo >
< start="118" dur="2.133"> dadka sida ugu badan u baahan. >
< start="120.133" dur="1.801"> Laakiin waa inaannaan abuurno nidaam >
< start="121.934" dur="2.066"> halkaasoo faa'iidooyinka caymiska shaqo la aanta >
< start="124" dur="2.334"> ayaa ka badan mushaharka. >
< start="126.334" dur="3.133"> Ma siin karno dadka wax kabadan oo aan shaqeyneynin inay shaqeeyaan. >
< start="129.467" dur="1.501"> Tani waa dareen guud oo aasaasi ah. >